Uncategorized – Page2– media sport
ယနေ့ သတင်းထူး ပြည်တွင်း အခွန်အရာရှိ ၂၈ ဦး လာဘ်စားမှုဖြင့် အရေးယူခံရ ************************** ( ၁၃.၅.၂၀၁၈ ) ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာနမှ အရာရှိ ၁၄ ဦးကို လာဘ်စားမှုဖြင့် ၀န်ထမ်းအဖြစ်မှ ချက်ချင်း ထုတ်ပစ်လိုက်ပြီး ကျန်အရာရှိ ၁၄ ဦးကိုလည်း ဆက်လက် အရေးယူသွားရန် စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။ ၀န်ထမ်းအဖြစ်မှ အထုတ်ခံရသည့် ယင်းအရာရှိများမှာ ရန်ကုန်တိုင်းမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ၅ ဦး နှင့် ဦးစီးအရာရှိ ၅ ဦး ၊ မန္တလေးတိုင်းမှ လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး ၃ ဦး နှင့် မော်လမြိုင်မှ လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး ၁ ဦးတို့ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဌာနအပြောင်းခံရသူ အခွန်အရာရှိ ၇
[Zawgyi] ဖခင်ဖြစ်သူ ဆုံးပါးသွားလို့ ပူဆွေးနေရတဲ့ သရုပ်ဆောင် နဝရတ် သရုပ်ဆောင်ဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ နဝရတ်ကတော့ သူမရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူ ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက် ပူဆွေးနေရပါတယ်။ အသက် ၉ ၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတစ်ဦးဖြစ်သူ သူမရဲ့ဖခင်ရဲ့ အသုဘကိုတော့ မနေ့ကပဲ သဂြိုဟ်လိုက်ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမအသုံးပြုတဲ့ ဖေ့စ်ဘွက်စာမျက်နှာမှာလည်း ဝမ်းနည်းခြင်း အနက်ရောင် ပရိုဖိုင်ပြောင်းလဲထားတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ပရိတ်သတ်အားပေးမှုရခဲ့သူ နာမည်ကြီးမင်းသားများနဲ့ ဇာတ်ကားများစွာ တွဲရိုက်ခဲ့သူ နဝရတ်တစ်ယောက်ကတော့ နောက်ပိုင်းမှာ အနုပညာလောကကက ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီး စီးပွားရေးနယ်မှာ ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ခုတော့ အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေးသမားတစ်ဦးဖြစ်နေပြီး အလှူအတန်းတွေလည်း လုပ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ Ref:Credit [Unicode] ဖခငျဖွဈသူ ဆုံးပါးသှားလို့ ပူဆှေးနရေတဲ့ သရုပျဆောငျ နဝရတျ သရုပျဆောငျဟောငျးတဈယောကျဖွဈတဲ့ နဝရတျကတော့ သူမရဲ့ဖခငျဖွဈသူ ကှယျလှနျသှားတဲ့အတှကျ ပူဆှေးနရေပါတယျ။
သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော် ကိုနေ့စဉ်ယုံယုံကြည်ကြည်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်း၏ ရလာတဲ့ အကျိုးကျေးဇူး
သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော် ကိုနေ့စဉ်ယုံယုံကြည်ကြည်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူး အချိန်မှာ မွန်းလွဲသုံးနာရီခန့် အချိန်ဖြစ်ပေသည်။ တိတိကျကျဆိုရလျှင် ၁၉၇၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၅ ရက်၊ မွန်းလွဲ သုံးနာရီခန့် အချိန်ဖြစ်ပေသည်။ စစ်တွေမြို့ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်တရားရုံးတွင် ရုံးကိစ္စများ ဆောင် ရွက်ပြီးနောက် ကျွန်တော်သည် မိမိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာ ပေါက်တောမြို့သို့ ပြန်ရန် အတွက် ပြည်နယ်တရားရုံးမှ မော်တော်ဘုတ် ဆိပ်ကမ်းရှိရာ ဆပ်ရိုးကျချောင်းဘက်သို့ ဆိုက်ကားဖြင့် လာခဲ့သည်။ လမ်းတွင်ပင် မိုးသည် တဖွဲဖွဲရွာစပြုနေပြီဖြစ်သည်။ ဆပ်ရိုးကျချောင်းရှိ ဘုတ်ဆိပ် (မော်တော်ဘုတ်ဆိပ်ကမ်း)သို့ ရောက်လာသောအခါ မိုးသာမက လေပြင်းတိုက်စပြုလေပြီ။ မိုးဦးလေဦးမို့ မိုးလည်းသည်း၍ လေလည်း ထန်တတ်ပါသည်။ တစ်နာရီ မိုင် ၄၀ နှုန်းဟူသည် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နှင့် ကပ်လျက်ရှိသော စစ်တွေမြို့အဖို့ တိုက် ရိုးတိုက်စဉ်ပင်။ ကျွန်တော်သည် မိုးလည်းရွာ၊
[Zawgyi]” တရားဟောတာ ဘက်မလိုက် ပါနဲ့ ” 😁 တစ်နေ့သ၌ ကျောင်းဒကာမ အပျိုကြီး မတင်ရွှေသည်ဦးသာကျောင်းသို့ ဆွမ်းပို့ လာ၏ ။ တစ်ရွာထဲ လည်းဖြစ် ဆွေမျိူး နီးစပ်လည်း တော်သဖြင့်ဦးသာတို့ ကျောင်းသို့ အရောက် အပေါက် များသလို ရင်နီးမှုလည်း ရှိလေသည်။ မတင်ရွှေ ဆွမ်းကပ်ပြီးနောက် ဦးသာအား လျှောက်လေ၏ ။ ” ဦးဇင်းတို့က တရားဟောတာ ဘက်လိုက်တယ် ” ” ဟင် ဘာဖြစ်လို့လဲ ??? ” ” ဘာဖြစ်ရ မှာလဲ ဦးဇင်းတို့ ဟောလိုက်ရင်တစ်ခါ လာလည်း မိဘ ကျေးဇူးတစ်ခါ လာလည်း မိဘ ကျေးဇူးမိဘ ကျေးဇူး ဆပ်ရမယ်ပဲ ဟောနေတာ … ”
[Zawgyi] ကင်ဂျုံအန်အား အလွန်ပွင့်လင်းရိုးသားသူဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်နယ်ထရမ့် ချီးကျူး ဧပြီလ ၂၄ ရက်တွင် အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်လ်ထရမ့်က မြောက်ကိုရီးယားသည် နှစ်နိုင်ငံကြားအဆင့်မြင့် ဆွေးနွေးပွဲကို အမြန်ဆုံးကျင်းပချင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကင်ဂျုံအန်ကိုလည်း အလွန်ပွင့်လင်းရိုးသားသူတစ်ဦးအဖြစ်ချီး ကျူးပြောဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အိမ်ဖြူတော်၌ ပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူရယ်မာခရွန်နှင့်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်စဉ်အတွင်း ထရမ့်က ကင်ဂျုံအန်နှင့် တွေ့ဆုံမည့်အစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့သည်။ ထရမ့်က“မြောက်ကိုရီးယားရဲ့လက်ရှိအပြုသဘောဆောင်တဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုကြည့်ရင် ကင်ဂျုံအန်ဟာ အရမ်းပွင့်လင်းရိုးသားသူမှန်းသိနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာ မြောက် ကိုရီးယားက ကတိတွေအများကြီးပေးခဲ့ပေမယ့် အခုလိုအနေအထားအထိရောက်အောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး” ဟု သတင်းသမားများကိုဆိုခဲ့သည်။ ဒေါ်နယ်လ်ထရမ့်နှင့်ကင်ဂျုံအန်သည် လာမည့်မေလ သို့မဟုတ် ဇွန်လတွင်တွေ့ဆုံ သွားမည်ဟု မျှော်မှန်းရသည်။တောင်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျေအင်က မြောက်ကိုရီးယားနှင့်အဆင့်မြင့်ဆွေးနွေးပွဲပြန်လည် စတင်နိုင်ရန် လာမည့်ဧပြီလ ၂၇ ရက်တွင် ကင်ဂျုံအန်နှင့်တွေ့ဆုံသွားရန်ရှိနေသည်ဟု သိရသည်။ မေဇွန် [Unicode] ကငျဂြုံအနျအား အလှနျပှငျ့လငျးရိုးသားသူဖွဈကွောငျး ဒျေါနယျထရမျ့ ခြီးကြူး ဧပွီလ ၂၄ ရကျတှငျ အမရေိကနျသမ်မတဒျေါနယျလျထရမျ့က မွောကျကိုရီးယားသညျ နှဈနိုငျငံကွားအဆငျ့မွငျ့
Liverpool, who last reached the final
Liverpool, who last reached the final in 2007, repeatedly breached the visitors’ naively high defensive line and scored five times in the opening 68 minutes ataraucous Anfield. Salah, who has now scored 43 goals since his summer move from Roma, scored twice and assisted two other goals. He curled his first into the